Linux inofanirwa kugara makore mangani? | Linux Vakapindwa muropa
Isaac | | Misangano / Zviitiko / Hurukuro, Kernel
Sezvaunoziva, Linux ine makore makumi maviri nemashanu ekuberekwa. Ranga riri zuva rake rekuzvarwa uye rakapembererwa munharaunda nemufaro. Iyo megaproject yakapona zvisinei nevavengi uye fungidziro dzakafanotaura remangwana rakaipa reiyo tsanga. Kubva 1991 kusvika muna Nyamavhuvhu 2016, kota yezana ramakore yakatopfuura uye ichiri kuenderera, asi… Zvichaenderera kwenguva yakareba sei? Zvakanaka, ramangwana rinotaridzika kunge rakajeka, kunyangwe risati rakunda chikamu chedesktop, inova ndiyo yega inosara kutonga (kunyangwe yakaitirwa chikamu ichi).
Hupenyu hurefu hweLinux zvinoenderana nenharaunda yekusimudzira iri kumashure kwayo uye iri hutano hwakanaka. Iyo zvakare yakafara kwazvo zvekuti inovimbisa kukura kusingaperi. Iyo purojekiti inotungamirwa na Linus Torvalds, asi haisi yake chete, iko iko kodhi yakapihwa nemusiki inenge isiri iyo panguva ino. Iwe unofanirwa kuziva kuti Linus paanosiya basa rake Greg Kroah-Hartman ndiye achava mutsivi wake, uye mushure meizvi mumwe achauya mumwe zvichingodaro. Hapana chikonzero chekushushikana nazvo.
Kana zvakadaro kuchengetedza, kune hurumende zhinji, makambani nemasangano anoenderana neLinux, kuti mari yayo inovimbiswawo. Mune maonero angu ekuzvininipisa, Linux ichapona sekureba sekunge kernel iri nani isina kugadzirwa iyo inogona kuitsiva nyore. Asi izvi zvinoita sezvakaoma kwandiri, nekuda kwesimba riri mu kernel kuvandudza uye shanduko, sezvo vavaki vayo vasingatyi kuita shanduko huru kana kunyora zvekare zvikamu zvakakwana kana zvichidikanwa.
Imwe tyisidziro inogona kudzikisira ramangwana re linux Ndicho chibvumirano chidiki pakati penharaunda, sezvo pasina mutungamiri akasimba saLinus, kusiyana kwemazano kunogona kuuraya chirongwa (sezvazvinoitika nemamwe akawanda akavhurwa mapurojekiti, kugadzira zvigadzirwa uye kusiyanisa basa pakati pezvirongwa zvinokwikwidzana) . Ndinovimba izvi hazviitike… Saka chingave chikanganiso chikuru kuti nharaunda ive neyakavimbika kuvimba neTorvalds uye nemaitiro ekuigadzirisa munguva yepashure-Linus.
Iwe unofungei? Siya zvaunotaura...
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » GNU/Linux » Kernel » Linux inofanirwa kugara makore mangani?
Pfungwa imwe chete nharaunda yeLinux inofanirwa kugadzira system nezvose zvakanakira kugoverwa kwayo.Ingave inobatsira
Izvo zvinhu zvedesheki zvatove kuzvimba mhuno dzako zvishoma. GNU / Linux haina kutonga desktop asi zvakanyanya kushomeka kwayo. Iyo ramangwana haisi nezve desktop desktop PC. Iyo ramangwana inopfuura kuburikidza nharembozha uye ndimo mune iyo GNU / Linux, ine zvigadzirwa zvakaita seApple, inotonga zvese. Kuita kwayo kwepamusoro, simba, kumisikidza uye pamusoro payo yese yakaderera marezinesi emitengo zvinoreva kuti ine chinzvimbo chakakura nhasi. Vangani veavo vanoshandisa desktop PC nhasi vasingakwanise kuita zvavanoita pariri kuburikidza ne smartphone kana piritsi? . Tsamba, Twitter, WhatsApp, Teregiramu, ... uye iyo PC yekutamba mukushayikwa kwekoni. Njodzi yeGNU / Linux ndeyekuti inova hombe hofori zvekuti inofa nekubudirira.
«Iyo PC yekutamba mukushaikwa kweconsole» iwe waikwikwidza, yakawanda.
Kune vazhinji vedu vanonyanya kufarira kutamba pakombuta panzvimbo pezvinhu zvekunyaradza (izvo zvandinoda ini, ndinojekesa, asi kwete zvakanyanya sekombuta).
Zvisinei nezvekuti iwe unogona kuita zvinhu zvakawanda nenhare mbozha, kunyangwe zvakadaro, ini ndinoona zvisingaiti kuti PC irarame. Kuti ushande nguva dzose, zuva nezuva, chero paine PC, bvisa zororo. Uye izvo, pamusoro pekuve nekombuta komputa, ini ndine laptop, piritsi, smartphone…. Asi kana zvasvika pakushanda zvakakomba uye nekuenderera, ini ndichiri kusarudza chiuru nguva kuzviita nedesktop, yekunyaradza, kurerutsa uye nekukurumidza.
Uye zvirokwazvo, Gnu / Linux, inofanirwa kuenderera mune gap yedesktop yePC.
carlos mario herrera akadaro
Nguva dzese dzandinoedza kugoverwa kweGNU \_ Linux ini ndinoshamiswa nebhizimusi ravo, redzidzo, uye shanduko dzekumba, zvinoshamisa, tisingataure huwandu hwemapurogiramu emahara arimo; Makorokoto pamakore makumi maviri neshanu uye ndinoziva kuti yemahara software nharaunda ichaenderera ichishanda uye isu vashandisi ticharamba tichishandisa OS
Pindura Carlos mario herrera
Zvinotaridza kwandiri kuti kushoma mukurumbira paPC yeLinux ine, inogara kwenguva yakareba, nekuti pamwe neMac iri imwe yeOS inotambura zvakanyanya kubva pakurwiswa nehutachiona, kwete seWindows. Kana ikakwira mukurumbira, makambani anobva kune dzimwe nzvimbo achauya kuzoedza kuitenga uye kuita shit sezvakaita Facebook neWhatsApp uye Instagram kana Microsoft ine Skype.
Iwe hauna chaunoziva nezve GPL, iwe?